Wasiirka amniga ee Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Boosaaso(Dhageyso)
December 5, 2012 - Written by
Boosaaso:-Wasiirka amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa goordhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana uu ka hadlay iska horimaad xalay ka dhacay deegaanka Sugure ee gobalka Bari kaas oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab.
Wasiirka amniga Dawlada Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in ay ka hortageen weerar ay soo qaadeen Ururka Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ay ka dileen 7 ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayna ka dhaawacmeen 12 kale wuxuuna sheegay in ay hub badan ka furteen Ururka Al-Shabaab sida uu sheegtay.
Wasiirka Amniga ee Puntland ayaa waxaa uu saxaafada u soo bandhiga ilaa 4 ka mid ah maydadka Kooxda Al-shabaab ee Buuraha Golis kuwaas oo ku dhintay dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Sugure . Wasiirka Amniga ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in ay jirto khasaaro soo gaaray gaari ay wateen ciidanka Daraawiishta kaas oo ay miino ku qaraxday isaga oo maraya wadada isku xirta Boosaaso iyo Sugure waxaana ku dhintay ilaa 10 askari.
Ciidamada Daraawiishta ee Puntland ayaa haatan ku sugan dhamaan deegaanadii ay dagaalada ka dhaceen xalay sida uu noo xaqiijiyey wariye madaxbanaan oo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari waxaana dib ugu laabtay Buuraha kooxihii ka tirsanaa al-Shabaab ee xalay weeraray deegaanka Sugure.
Dhanka kale Ururka Al-Shabaab ayaa bogooda Twitterka waxay ku sheegeen in iyagu ay weerarka ku qaadeen togga Sugurre ay dileen 12 ka tirsan ciidanka Puntland.